Chinja zvinangwa zveKurovedza muviri, Kumira uye zviso zvitsva zvewachi muwatchOS7 | Ndinobva mac
Chinja Kusimba, Kumira uye zviso zvitsva zvewachi muwatchOS7
Kuvhurwa kweiyi vhezheni itsva yeWatchOS 7 ichave nhasi Chitatu, Gunyana 16, 2020 kune vese vashandisi vane Apple Watch Series 3 zvichienda mberi uye chimwe chezvinhu zvakajairika zvitsva zvataigona kuona nezuro muchimiro chezvikamu zvitsva, mushure mekuratidzwa kweApple Watch Series 6 uye SE.
Mune ino kesi, iyo Cupertino kambani ichavhura mitsva mitsva yezvishandiso zvese zvinoenderana neiyi vhezheni 7 uye zvakare inobvumidza kugadzirisa zvinangwa zvezuva nezuva zveKurovedza muviri uye "Kumira" izvo Parizvino zvakagadziriswa pamaminitsi makumi matatu ekurovedza muviri uye maawa gumi nemaviri ekumira.
Mune iyi vhezheni nyowani zvinogoneka chinja huwandu hwemaminetsi atinoda ku "Exercise target" uye "Yakamira tarisiro" iyo yaive yakaganhurirwa kumaminetsi makumi matatu nemaawa gumi nemaviri zvichiteerana. Aya angori akati wandei maficha anouya neiyo nyowani vhezheni yeWOSOS 30, asi zvirokwazvo tine zvimwe zvakawanda zvaticharamba tichiona nhasi nanhasi kana idzi shanduro dzatanga zviri pamutemo.
Apple ine iyo iPadOS, watchOS, iOS uye tvOS kuburitswa kwakagadzirirwa nhasi, asi haina kutaura chinhu pamusoro peshanduro nyowani ye macOS, saka Vashandisi veMac vanogona kumirira kwenguva refu kugamuchira iyo nyowani vhezheni ye macOS 11 Big Sur pamakomputa edu.
Masikati ano zvirokwazvo haazove akabatikana sanezuro asi zvirokwazvo nekuuya kweshanduro nyowani Tese tichave takamirira kurodha pasi kwayo uye nekumisikidza inotevera pane zvishandiso zvedu. Isu tichasimbisa kana pakupedzisira macOS ikasatanga nhasi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Chinja Kusimba, Kumira uye zviso zvitsva zvewachi muwatchOS7
Apple inotiratidza ese matsva mawOSOS 7 mabhora muvhidhiyo
Podcast 12 × 01: Apple Chiitiko Kuongorora